အဘယ်သူမျှမ legit လိင်နှင့် PMO ၏အနှစ်အနှစ်အပြီးပျောက်ကင်းအောင်ကုသ ED - သင်၏ဦးနှောက် Porn တွင်: ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန် - အသက်အရွယ် 28
အသက် ၂၈ နှစ် - ဆေးဆရာဝန်။ နှစ်ပေါင်းများစွာတရားဝင်လိင်ဆက်ဆံမှုမရှိခြင်းနှင့် PMO နှစ်များကြာပြီးနောက် ED ကိုကုသခဲ့သည်
ငါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး5နှစ်ပေါင်းကတည်းကညစ်ညမ်းသွေးဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုရှိခဲ့ခြင်းနှင့်ယခုတွင်ငါသည် 28 ဖြစ်၏။ ငါတူရည်းစားလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ရှိခဲ့ပါတယ်။ တစ်နှစ်သူမ၏နှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်ဈရိုးရှင်းစွာတော့ဘူး။ Viagra ၏အကူအညီနှင့်အတူအချိန်အများစု - ပြီးခဲ့သည့်4နှစ်များတွင်ကျနော်တို့လိင်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး 10 ကြိမ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတစ် ဦး အတွက်ဘာကိုဆိုလိုသည်ကိုသင်မြင်ယောင်ကြည့်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ဒီအခြေအနေကိုအမှန်တကယ်မထီမဲ့မြင်ပြုခဲ့သည်။ ငါ porn မှတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနိုင်ကတည်းကကိုယ့်ကိုယ်ကိုမှထင်အရာအားလုံးကိုကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်ထင်ခဲ့တယ်။ ဒါကငါခန့်မှန်း 1 နဲ့စတင်တစ်နေ့လျှင် 3-19 ကြိမ်ပြုလေ၏။ ငါသေခြင်းချုပ်ကိုင်မှုအချို့ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်ပုံပါဘဲ။ ကိုယ့်ကိုမထိတော့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော့်ငပဲဟာစိမ်းနေပြီ ငါဘယ်တော့မှလိင်အိပ်မက်တွေ၊ ထိုအခါငါသင်နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်ကကိုယ့်ကိုကိုယ်တွေ့ကြုံခံစားကြဘူးသကဲ့သို့ငါ့ကိုမယုံကြလိမ့်မည်ဟုထင်: ငါပဲဂရုမစိုက် !!! ငါbrainရာမ ဦး နှောက်မြူထဲတွင်ရှိ၏
ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 ခုနှစ်တွင်အရာနှစ်ခုဖြစ်ပျက်:
ငါအသစ်တခုအမြိုးသမီးတတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး - ငါ့အကိုလက်ရှိ Girlfriend နှင့်ငါ့ကြားဆက်ဆံရေးဖြတ်။
YouTube မှတဆင့် browsing နေချိန်မှာငါမျှသာအခွင့်အလမ်းအားဖြင့် yourbrainonporn.com ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ငါ Viagra သို့မဟုတ်အခြားပစ္စည်းပစ္စယပေါ် မူတည်. ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး 10 ကြိမ်ငါ၏အသစ်ကို Girlfriend နဲ့အတူလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်လိင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ တစ်နေ့နေ့မှာဧပြီလကိုယ့် reboot စတင်ခဲ့ပြီး - အဘယ်သူမျှမညစ်ညမ်းနှင့်မျှမတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေတော့ဘူး။ သူ့ကိုငါ၏တွှေချင်ခဲ့ပါဘူးကတည်းကကျွန်မရဲ့ပြဿနာတွေကိုငါ၏အသစ်ကို Girlfriend မပြောခဲ့ပါဘူး။ တကယ်တော့ကိုယ့်သူမ၏နှင့်အတူပုံမှန်လိင်ဘဝကိုရှိသည်မဟုတ်နိုင်ကြောင်းအလွန်ကြောက်လန့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမ၏ထွရည်းစား tantra လိင်သို့နှင့်သူမဟာအလွန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
မေလအတွက် 17th တွင်ပြုလုပ် (နေ့ ZERO) ဖြစ်ပျက်: ကျွန်မမှာပြproblemsနာများစွာရှိပြီးစိုက်ထူမှုကိုသာမကဘဲလိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုခံခဲ့ရသည်။ ငါကမကြိုက်ဘူး၊ အဲဒါကငါနဲ့မရင်းနှီးဘူးလို့ခံစားခဲ့ရတယ်။ အခုတော့ငါဟာအထွတ်အထိပ်သို့ရောက်နိုင်ရုံသာမကဘဲငါ 20mg cialis ဆေးသောက်ခဲ့ပေမယ့်ချစ်သူရည်းစားမှာလည်းအားပျော့သွားတယ်။ နောက်တစ်နေ့တွင်ထပ်တူဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ အခုတော့ငါတကယ် shitty ခံစားရတယ်: ငါဒီကြီးမားအတိုင်းအတာအတွက်ပြproblemsနာများရှိခဲ့ပါလျှင်ဤဆက်ဆံရေးကိုဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သင့်သလဲ အိမ်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာ၊ ကျွန်မရဲ့ sexy (!) Girlfriend ကငါ့ကိုထိမိရင်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ရွံမုန်းတယ်လို့ခံစားမိတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကိုပြောသည်ကတည်းကဤသူကားငါ၏အမှန်တကယ် reboot ၏နေ့တစျခုခြေတစ်လှမ်း:
အဘယ်သူမျှမ Viagra မျှ cialis စသည်တို့ကိုတော့ဘူး
တနင်္ဂနွေတစ်ခုမှာ: (နေ့က 6) ကျနော်တို့ကရှည်လျားသောအကွာအဝေးဆကျဆံရေးရှိဒါတပြင်လုံးကိုလာမယ့်သီတင်းပတ်အတွင်းထိတ်လန်ခံရနောက်တစ်နေ့နံနက်စွန့်ခွာခဲ့ရသည်။ နောက်တစ်နေ့တနင်္ဂနွေမင်းမိန်းမအားမောင်းနှင့်ကိုယ်ကျိန်းသေသူမ၏တစ်ခုခုပြောပြလိမ့်မည်ဟုကိုယ့်ကိုယ်ကိုကပြောကြားခဲ့သည်။ ငါကပထမဦးဆုံးညနပေိုငျးလုပ်ဖို့ကြောက်ဖို့ဖြစ်တယ်ပေမယ့်နံနက်ယံ၌သူမ၏သို့ပြောသည်။
ငါဘာလုပ်ခဲ့သလဲ။ ပထမတော့ငါ့ Girlfriend ကိုငါအရင်ကဒီလိုပြproblemsနာမျိုးကြုံခဲ့ဖူးပြီးသူမအမှားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။ ငါထပ်မံဖြစ်ပျက်လာပြီးနောက်တစ်ခါ ထပ်မံ၍ အလုပ်မလုပ်မချင်းတစ်လမှနှစ်လအထိကြာနိုင်သည့်အတွက်ကျွန်ုပ်စိတ်ဓာတ်ကျသည်ဟုခံစားရကြောင်းပြောပြခဲ့သည်။ ငါပြောခဲ့တာကဒါဟာစွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာစိုးရိမ်စိတ်ဖြစ်တယ်၊ မိန်းမတစ်ယောက်မှာအားနည်းသွားတာမျိုးဟာယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုဖြစ်ပျက်မယ်ဆိုရင်သူကအကြီးအကျယ်စိတ်ဓာတ်ကျနေပြီးကြာရှည်စွာအလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ ငါ Viagra ကိုသုံးနေစဉ်အတွင်းကျွန်ုပ်သည်“ ကြီးသော” လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အားသာချက်ရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သူမကိုဘယ်တော့မှမပြောခဲ့ပါ။ ငါသူမကြောင့်စိတ်ပူမဟုတ်ခဲ့ပုံပါဘဲ။ ဟုတ်ပါတယ်။ ယောက်ျားတွေဘယ်လို reboot လုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားတက်ဖွယ်ပုံပြင်တွေအားလုံးကိုဖတ်ခဲ့တယ်။ ဒါကမင်းကိုယ်တိုင်ပဲ။ အဲ့ဒီအချိန်မှာသူဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲ၊ ဘယ်လောက်ကြာမယ်ဆိုတာမသေချာဘူး။
ကျနော်တို့ကရှည်လျားစကားပြောဆိုမှုရှိခဲ့သည်။ သူမသည်အလွန်အားတက်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမသည်ငါ့ကိုအများကြီးချစ်ပြီးသူမကျွန်တော်နေသမျှကာလပတ်လုံးယူစခွေငျးငှါကြောင့်ကျော်ရရှိမည်နှစ်ဦးစလုံးကဆိုသည်။
အဲဒါကိုယုံကြည်သို့မဟုတ်မ: ကျနော်တို့နောက်မှ cuddled နှင့်ငါ့လိင်တံ - နှစ်အတွင်းပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့ - ကိုယ်တိုင်ကခြင်းဖြင့်ခဲယဉ်းတယ်။ ငါရိုးရှင်းစွာဈ PIED သို့မဟုတ် performance ကိုစိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ရပြီးကျနော်တို့လိင်ခဲ့ကြောင်းမေ့လျော့ကြ၏။ ငါ့ကိုမဟုတ်ခဲ့လျှင်ငါကယုံကြည်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ငါးနှစ်ကြာပြီးတဲ့နောက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ် legit လိင် Viagra ၏အကူအညီမပါဘဲ။ သင်တန်းငါကြီးမြတ်ခံစားရတယ်။ ငါသည်ငါ့အမှန်တကယ် reboot အဲဒီအခြိနျမှာအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးမသိရပါဘူးဒါပေမယ့်ကိုယ့်နောက်ဆုံး PMO သုံးပတ်အကြာကြီးထိုအချိန်ကပုံပါဘဲ။ ကိုယ့်ကိုမဖို့ရွေးချယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါထှတျအထိပျမပေးခဲ့ပါဘူး။ ငါ climaxed မတိုင်မီကိုယ့်ရပ်တန့်နိုင်အောင်ပြုလုပ်အော်ဂဇင်ကိုပြန်သင့်ရဲ့ reboot ၌သင်တို့ကိုပစ်နိုင်တယ်လို့ကြား၏။
ကိုယ့်ပထမဦးဆုံး succces ခဲ့သောကွောငျ့နောကျနေ့ကနောက်တဖန်ကိုယ်အကြောင်းကိုအများကြီးဂရုစိုက်ကြဘူးရသောအလုပ်မလုပ်ဘူး!
နောက်တစ်နေ့အပတ်က ကိုယ့်နံနက်သစ်သားခဲ့နှစ်ပေါင်းကတည်းကပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အမေ။ ဒါဟာအကြီးခံစားရတယ်။ ငါစုစုပေါင်းကိုယ်အကြောင်းကိုအကြီးခံစားရပြီးတစ်ဦးမွေးကင်းစလိင်ဘုရား ;-) အဖြစ်ခံစားခဲ့ရပါတယ်။ နောက်တစ်နေ့တနင်္ဂနွေကိုငါ့ရည်းစားငါ့ဆီသို့ရောက် လာ. ကျနော်တို့ကိုတဖန် climaxing မဟုတ်သောကြာနေ့ညဦးယံ၌နောက်တဖန်လိင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ နောက်တစ်နေ့နံနက်ဈ flatline စတင်ခဲ့ပုံပါဘဲ။ လိင်အလုပ်မလုပ်ဘူး။ ငါစိုက်ထူမရနိုင်ခြင်းနဲ့ကျွန်မအနည်းငယ်စိတ်ဓာတ်ကျတယ်။ ကိုယ့်စိတ်မကျဆေး Antidepressants တာ, ဒီမှာကအကြောင်းမေးသော်စဉ်းစားဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည်: http://www.yourbrainrebalanced.com/index.php?topic=10101.0
ကိုယ် flatline ခဲ့မှန်း - - ကိုယ့်ကြောင့်လည်းစိတ်ကျရောဂါ resp နှင့်အတူကူညီပေးသည်ဖတ်ကတည်းကကို restart ကြိုးစားရန်လိုခငျြဈပိုကောင်းသဘာဝကျကျခံစားရပြီးကိုယ့်တော့ဘူးနံနက်သစ်သားသို့မဟုတ်လိင်အိပ်မက်ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါသော်လည်းဘုရားကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ flatline သွားသောအခါ, flatline စိတ်ကျရောဂါပျောက်တတ်၏။
နောက်တစ်နေ့အပတ်က ငါသည်ငါ့ဟောင်းရည်းစားတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ကိုယ်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့တာဝနျရှိသညျဟုကတည်းကကျွန်မရဲ့အခွအေနေအကြောင်းကိုသူမ၏အရာအားလုံးကပြောကြားခဲ့သည်။ သူမသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်များတွင်အများကြီးခံစားခဲ့ရသည်။ ငါကဒီမှာအကြောင်း wrote: http://www.yourbrainrebalanced.com/index.php?topic=10231.0
နောက်ဆုံးတနင်္ဂနွေ (နေ့က 28) ငါ့ရည်းစားငါ့ကိုလာတယ် ငါ flatline မှာရှိနေတုန်းပဲ၊ ဒါပေမယ့်ပြီးခဲ့တဲ့စနေ၊ တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်အလုပ်လုပ်ခဲ့တာနဲ့တပြိုင်နက်ငါလိင်ဆက်ဆံနိုင်တယ်။ သို့သော်ဘာမျှဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ အစပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်၏ဒစ်သည်ကျွန်ုပ်၏ sexy နှင့် sweaty Girlfriend ကိုအနံ့ခံလိုက်ရုံဖြင့်ခက်သွားသည်။ ကျနော်တို့အိပ်ရာဝင်တဲ့အခါအမှုအရာကလေးလေးနက်နက်စလာတဲ့အခါနောက်တစ်ခါအလုပ်မဖြစ်ဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြားချပ်ချပ်ရှိတယ်လို့ကိုယ့်ကိုကိုယ်ထင်ပြီးစိတ်ဓာတ်မကျခဲ့ဘူး၊ ပထမဆုံးအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ချိန်ကမှပိုကောင်းလာလိမ့်မယ်။ ငါရည်းစားနှင့်ထပ်မံစကားပြောနေတုန်းပဲ၊ ယောက်ျားတစ်ယောက်ကသူမဆီကိုမထိန်းနိုင်တာကိုဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတာပြောပြလိုက်တယ်။ ငါတို့တစ်နာရီစကားပြောပြီးဖြစ်လို့မှော်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်မရဲ့လိင်တံကအရမ်းပြင်းထန်လာပြီးကျွန်မတို့လိင်ဆက်ဆံခဲ့တယ်။ ဤအချိန်တစ်ကြိမ်သာမဟုတ်ဘဲနှစ်ကြိမ်၊ ဤညနေခင်းနှင့်ကျွန်ုပ်၏စိုက်ထူခြင်းအရည်အသွေးသည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ ငါအလွယ်တကူထနှင့်ပြတင်းပေါက်ပိတ်လိုက်, ပြန်သူမ၏နှင့်လိင်ဆက်ဆံဆက်လက်နိုင်ဘူး။
နောက်တစ်နေ့တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သုံးကြိမ်တိုင်လိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်။ အကောင်းဆုံးကတော့၊ မနေ့ကသူမလည်းငါ့ကိုထိုးနှက်ခဲ့ပြီးငါအထွတ်အထိပ်ရောက်ခဲ့တယ်။ နောက်တစ်နေ့မနက်မှာကျွန်မရဲ့စွမ်းအင်အားလုံးကုန်သွားပြီလို့ခံစားရတယ်။ လိင်မှုဆိုင်ရာစွမ်းအင်အားလုံးကို ၂၈ ရက်ကြာစုဆောင်းခြင်းသည်အထွing်အထိပ်သို့ရောက်သောအခါမပြီးနိုင်သေးသော်လည်းယခုအားလုံးပျောက်ကွယ်သွားပြီဟုခံစားခဲ့ရသည်။ သို့သော်ကျေးဇူးတင်ပါဘုရား။ ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားနှင့်ထပ်မံလိင်ဆက်ဆံနိုင်ခဲ့ပါသည်။ မွန်းလွဲပိုင်းတွင်တောအုပ်သို့ကျွန်ုပ်တို့သွားခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပျက်ခဲ့ရာကိုသင်ခန့်မှန်းနိုင်သည်။
ယနေ့တွင်: ငါလုံးဝအနာကိုငြိမ်းစေသူဖြစ်ကြောင်းကိုမခံစားရဘူး။ ငါ GREAT တိုးတက်မှုဖန်ဆင်းထင်ပေမယ့်ကိုယ့်နေဆဲဈကျောပုံမှန်မဟုတ်ဖြစ်ကြောင်းကိုခံစားရတယ်။ တဖန်ငါ flatline ထိမှန်စေခြင်းငှါ, သို့သော်ယခုဒီအားလုံး curable 110% ကြောင်းသေချာဖြစ်ကြောင်းကို !!!!!
ငါစောစောထတာနဲ့ငါ့ရည်းစားနဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းကငါ့ကိုမေးတယ်။ ဒါကငါ့မျက်စိကိုဖွင့်လိုက်တယ်။ ငါမှာစွမ်းအင်တွေအများကြီးရှိတယ်။ ငါပြည့်နေတယ် !!! ပါဝါ၏😉
အော်ဂဇင်မရ! ငါအော်ဂဇင်ကိုမပြုခဲ့ဘူးဆိုရင်ငါအများကြီးပိုလို့တောင်ခံစားရမယ်လို့နောင်လာမည့်ရက်သတ္တပတ်များအထွတ်အထိပ်သို့ရောက်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်၏ Girlfriend ကိုပြောကြားခဲ့သည်။
ဆုတောငျးလကျြ။ ငါဘုရားကိုယုံကြည်သူသည်ငါ့ကိုအများကြီးကူညီပေးခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင်အမည်မသိသည့်အရက်သမားတစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားအင်အားသုံးသူတို့ရဲ့စွဲလမ်းနှင့်အတူသူတို့ကိုကူညီလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
သူမခံစားခဲ့ရပါလျှင်ငါ့ဟောင်း gf အတိုင်း, သင်တို့၏ဟောင်းမိတ်ဖက်ပြောပြပါ။ (ကျနော်အပြစ်ကြီးမားခံစားချက်တွေကိုခဲ့) ။
အမေနဲ့အစ်မကိုလည်းပြောခဲ့တယ်။ သုံးပတ်အကြာမှာ reboot လုပ်ပြီးနောက်ကိုယ့်ကိုယ်ထင်တာကိုဂရုမစိုက်ဘူး။ အဲဒါကကျွန်မရဲ့အခြေအနေကိုလက်ခံဖို့ကူညီပေးတယ်။
ငါ (ငါလက်တွေ့ကျကျသင်ျခြိုခဲ့ !!) စတင်ဘယ်မှာနေသောသင်တို့ရှိသမျှရန်: ပြန်ဖွင့် 110% အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအနည်းငယ်အချိန်ပေးပါ။ တချို့ကကြာပေမယ့်သင်မျြးသာပေးမညျ !! ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်အချိန်ကြာမြင့်စွာကမယုံကြည်ခဲ့ပါဘူး။
LINK - အဘယ်သူမျှမ legit လိင်နှင့် PMO ၏အနှစ်အနှစ်အပြီး Recoverd
ဇွန်လ 16th, 2013
သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နှင့် Porn သွေးဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု - PIED
ငါဆရာဝန်တစ်ဦးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် (လူငယ်တစ်ဦးတဦးတည်းပေမယ့်) ဖြစ်၏။ ငါဆရာဝန်တစ်မိသားစုကလာနှင့်သင်တန်း၏ငါသည်ငါ၏အလုပ်ကြောင့်အခြားအဆရာဝန်များကအများကြီးကိုသိ.
အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်ရောက်ရှိနေသောနိုင်ငံ (အနောက်ဥရောပ) တွင်ဤအချက်ကိုသဲလွန်စမသိရှိပါ။ ဤပြmနာနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့မသိပါ၊ ၎င်းကိုမည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကိုမသိပါ (အဆိုပါရောဂါပျောက်ကင်းမှုသည်ပြန်လည်စတင်ခြင်းဖြစ်သည်) ။ ဤပြင်းထန်သောကျန်းမာရေးအခြေအနေသည်“ ပုံမှန်” ဆရာဝန်များ၏ရေဒါအောက်တွင်ပျံသန်းနေပုံရသည်။
ငါကိုယ့်ကိုကိုယ်7နှစ်ကတည်းက PIED ပါပြီ! (ကိုယ့်ဇာတ်ကြောင်းကိုမကြာခင်ရေးမယ်) ငါ YouTube ပြကွက်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဒီပြသနာကိုသိပြီး၊ ငါ့မျက်လုံးကိုဖွင့်ပေးသော yourbrainonporn.com ကိုထိမိခဲ့သည်။ ငါသည်ဤစာမျက်နှာအတွက်လုံလောက်သောဂယ်ရီကျေးဇူးတင်လို့မရပါဘူး!
1 ။ သင့်ရဲ့အခွအေနေအဘို့အကိုယ့်ကိုကိုယ်အပြစ်မတင်ပါနဲ့။ သင်မည်သို့သင့်သည့်အခါပင်ဆရာဝန်များကဤပြဿနာကိုအကြောင်းကိုမသိကြသလော
၂ ။ သူတို့ကိုက်ညီတယ်ဆိုရင်ရောဂါလက္ခဏာတွေကိုဖတ်ပါ။ reboot လုပ်ပါ။ https://www.yourbrainonporn.com/how-do-i-know-if-my-ed-porn-related-test3။ ဖြစ်နိုင်လျှင်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုပြန့်နှံ့!